Ny tsy manam-paharoa amin'ny aterineto amin'ny aterineto slot lalao niaraka tamin'ny endri-javatra tsy manam-paharoa, Action Bank dia sehatra lehibe mba handresy tena vola an-tserasera. Mpiloka tia mahazatra foto-kevitra ao amin'ny slot lalao, fa tsy nanana lohahevitra mahazatra ny finday aterineto slots dia miandalana slots. Barcrest efa nanao asa lehibe amin'ny alalan'ny fampidirana Action Bank, satria ny tombony endri-javatra dia afaka manampy mpilalao lehibe mandresy.
Izy io dia miraingiraingy azon'ny dimy sy 20 betline slot lalao an-tserasera izay mampiseho ny sasany mahaliana marika. Mpiloka no mahita izany tena manintona noho ny sary sy feo kalitaon'ny ny mozika. Ny filokana feno boky fampianarana omena etsy ambany lafiny ny efijery ary dia manasongadina ihany koa ny Auto-milalao safidy.
Marika sy ny Game-Play:
Action Bank mpiloka no tena manintona noho ny marika. Ity lalao ity dia manana marika telo lehibe, mena 7, X sy ny Bar. Ireo no marika telo izay ho hitanao eo amin'ny kofehy reels. Azonao atao ihany koa ny tany mahamaro fotsy faribolana, nefa tsy hamaly soa anao na loka. Manan-danja roa marika io lalao dia ny Joker, ny bibidia marika sy The Golden Vault, aelezo mariky. Andramo an-tanety ireo fanehoana an'ohatra roa ho imbetsaka araka izay azo atao, satria izany dia afaka manome anao Fandresena lehibe sasany sy ny endri-javatra tombony.
Ny lalao nihazakazaka hampandeha tsara, ary dia tonga lafatra ho an'ny lehibe sy ny kely efijery. Milalao izany ianao Toy izany koa tahaka ny aterineto finday slots, fa ny tombony lafin-javatra miteraka ny tena maha samy hafa ny Action Bank sy ny hafa-tserasera ety anaty aterineto finday slots.
Ny fomba fitadiavam-bola be ny sasany perks amin'ity lalao:
Tsy dia sarotra ny mahafantatra fa fipetrahana filaharan'ireo mena 7s afaka manampy anao eo amin'ny fitadiavam-bola ny sasany mahavariana multipliers. Afaka handresy ny mba 500x ny stacked vola sy izay miavaka ho fandresena ho anao. Faribolana Ny fotsy dia afaka hivadika ho volamena faribolana ny lalao, ary raha mbola, mahazo bebe kokoa multipliers.
Ny endri-javatra maimaim-poana kofehy ireny dia miankina amin'ny manahaka. Landing dimy na mihoatra aelezo marika hitarika ny endri-javatra kofehy ireny maimaim-poana ho anareo. Marika miasa anaty ala Toy izany koa araka izay tsy misy hafa amin'ny hafa amin'ny aterineto finday slots. Ho marika famantarana hafa hisolo hamoronana mandresy tsaratsara kokoa filaharana.
Action Bank dia manasongadina Big Banky tombony mampiavaka izay mahatonga ny maka manodidina. Afaka haka mariky iray avy amin'ny diamondra, Ruby na safira mba hahazoana bebe kokoa multipliers.
Action Bank tonga lafatra amin'ny aterineto slot lalao ho an'ny maro mampangitakitaka sy ny asa. Ity lalao ity dia manana 95.16% RTP ary afaka handresy tokoa ny jackpot ka vao ny mandresy fitambaran'ny.